Yakareba Tafura Inovhara Fekitori | China Standard Tafura Inovhara Vagadziri uye Vatengesi
Tsika Yakadhindwa Round Tafura Inovhara
Panzvimbo pekuratidzira logo yako uye graphic neyakajeka ficha yakasiyiwa patafura inokanda chinhambwe chakareba, tafura yakatenderera yehurukuro pakati pevanhu vaviri inonyatsotarisisa logo yako, uye nekudaro inowedzera mukurumbira wako wekuzivikanwa.
Square Tafura Inovhara Yekutenderera Ratidza Tafura
Unoda kuve nepedyo-kutaurirana neako anogona vatengi? Mukoke kuti agare patafura yakatenderera uye utange hurukuro yako inonakidza.
Rudzi urwu rwevhavha tafura yekuvhavha yakagadzirirwa kusangana zvaunoda. Chinyorwa chako pajira patafura chinoonekwa izvo zvinobatsira kufadza vatengi vako uye nekudaro zvinowedzera mukurumbira wako.